Dadka intooda badan rabaan in ay u gudbiyaan xogta u dhexeeya telefoonada u badan oo sababo kala duwan. Wax kasta oo xogta aad soo bedelanaya ka qalab Samsung in kale, dhexdhexaad ah ee aad isticmaalayso si ay u kala iibsiga waa sida ay muhiim haddii aan ka muhiimsan. Sir ma aha in aad ka heli doontaa wax badan oo ka mid ah siyaabaha ay u gudbiyaan farriimo xogta ay ka mid yihiin mid ka mid phone in kale. Inkasta oo ay jiraan qaar ka mid ah in ay yihiin kuwo aad wax ku ool ah oo ku siin doonaa dhexdhexaad ah oo lagu kalsoon yahay, wax badan oo ka mid ah ayaa loo samayn doonaa unu yar. Waxaa ka mid ah;
• Mid ka mid ah qaladaadka ugu badan marka ay timaado qalab aad u isticmaali karto si aad fariimaha wareejiyo ka mid phone in kale waa isku halaynta.
• Waxaa jira kuwa fudud waa mid aad u adag in la isticmaalo dadka intooda badan aan is-bixio casriga ah ka fiirsan.
• Waxaa ka mida kuwo qalab doontaa kharash aad u badan si ay u bartaan ama la hal nooc oo phone oo aanay kuwa mid kale ka shaqeyn doonaan.
Waxaa • Waxa kale oo jira dad kale oo waa lacag la'aan si ay u isticmaalaan, laakiin shaqeyn doonaan oo qura muddo aad u gaaban ka hor iyaga oo aan shaqayn haba yaraatee.
Waxaan oo dhan ayaa dhibane software in uu ballan qaaday mid ka mid ah wax ka dibna aanu shaqayn haba yaraatee.
Tani waa sababta aan u maleynayaa in dhinaca ugu muhiimsan ee xogta wareejinta waa in qalabka aad isticmaasho. Halkan sababta;
• Software aad go'aansato in aad isticmaasho waa in lagu kalsoonaan karo oo waxtar leh.
• Waxa ay awoodaan in ay ku siiyaan xaddiga saxda ah ee helitaanka iyo geynta waa in.
• Kor oo dhan, si aad u horumarsan software aanu u qaadan in aad ogaan doontaa sida loo isticmaalo; waxaa ay hubisaa in ay tahay si fudud in ay isticmaalaan xamili karo software aan u baahan gargaar aad u badan xitaa newbie ah.
• Waa in ay sidoo kale ku dhumin waqti aad, aad rabto inaad sidaan sameyso si degdeg ah oo aad u hesho dib u nolol maalmeedkaaga.
Nasiib wanaag idiin, waxaana dooneynaa in la eegaya 2 gogo 'oo software in ay leeyihiin dhammaan sifooyinka kor ku xusan iyo sida ay u arkaan mid kasta oo iyaga ka mid ammaan ah waxay kaa caawin kartaa si fudud oo fariin ka helay mid ka mid Samsung Phone wareejiyo kale.
Isticmaalka Wondershare MobileTrans
Wondershare MobileTrans kuu ogolaanayaa inaad si ay u gudbiyaan xiriirada, fariimaha qoraalka ah, abuse wac, jadwalka taariikhda, music, videos, sawirada iyo xitaa Apps dhexeeya telefoonada kala duwan oo dhan mid ka mid click. Tani waa mid aad u fudud in la isticmaalo software ka shaqaysa oo keliya ku saabsan dhammaan taleefanada ay ka mid yihiin Samsung, Blackberry, Nokia, iPhone oo dhan Android casriga ah. Waxa kale oo loo isticmaali karaa in gurmad iyo soo celinta xogta aad telefoon si aad marna u leeyihiin in ay lumiso xogta aad xitaa haddii uu kaa lumo telefoon. Halkan sida loo isticmaalo Wondershare MobileTrans fariimaha wareejiyo ka Samsung in Samsung.
Talaabada Koowaad: Ka bilow ayadoo laga soo degsado iyo ku rakibidda Wondershare MobileTrans in aad PC.
Tallaabada Labaad: Marka geedi socodka rakibo dhamaato, xirmaan labada telefoonada si aad u your computer iyadoo la isticmaalayo fiilooyinka USB. Software ayaa lagu ogaan doonaa labada telefoonada aad oo ay soo bandhigaan doonaa sida muujinayaa image hoose.
Fiilooyinka USB. Software ayaa lagu ogaan doonaa labada telefoonada aad oo ay soo bandhigaan doonaa sida muujinayaa image hoose.
Dhammaan xogta ka phone isha lagu soo bandhigi doonaa qaybta dhexe. Halkan ka dooro fariimaha maadaama tani ay tahay waxa aad rabto in lagu wareejiyo.
Tallaabada Saddexaad: marka aad soo xulay fariimaha, guji nuqul ka bilaabatay iyo fariimaha oo dhan ayaa la koobiyeyn doonaa phone isha si phone Ahaado ah. Hubi in taleefanada ay sii xiran oo dhan nidaamka oo dhan.
Wondershare MobileGo dhinaca kale waa software kama dambaysta ah si ay u maareeyaan warbaahinta qalab iyo macluumaad kale. Software Taas ayaa ka dhigaysa in ay aad u fududahay in aad maamusho ee daruuriga ah ee qalabka aad mobile. Sidoo kale waa mid aad u fudud in ay isticmaalaan oo ay hawl kasta ee ka mid ah oo kaliya click. Waxaa aad u ogolaanaya in ay kaabta iyo soo celinta xogta aad, diro fariimo ka desktop iyo xitaa nuqul xiriirada ama xataa beddelaan qalabka iyo si fudud u maareeyaan app ururinta.
Halkan sida loo isticmaalo MobileGo Wondershare fariimaha wareejiyo ka qalab Samsung in aad PC.
Tallaabada Koowaad: Download iyo rakibi version ugu dambeeyay oo ka mid ah software Wondershare MobileGo on inay your computer.
Tallaabada Labaad: Burcad barnaamijka ka dibna isku xiro qalab Samsung in your computer iyadoo la isticmaalayo fiilooyinka USB. Qalab aad lagu soo bandhigi doonaa furmo mar xidhiidhka ka dhamaato.
Ogsoonow in aad sidoo kale ku xidhi kartaa qalab Samsung via Wi-Fi, laakiin si ay taasi u suuragasho waa in aad hubiso in aad ku rakibtay MobileGo.apk ku saabsan telefoonka oo aad markaas u isticmaali karto inaad lambarka sirta QR on desktop version MobileGo ah in ay ku xidhmaan .
Talaabada Sadexaad: Tiirka tagay, guji SMS. Furmo suuqa maamulka SMS ah oo ka muuqan doona in u ogolaan doonaa in aad dooratid threads fariin aad jeclaan lahayd inaad ku wareejin ah. Marka aad soo xulay threads aad rabto, guji Save. Wondershare MobileGo badbaadin doonaa fariimo ah in aad PC ee .xml ama qaab .txt.
Tani waa hab fiican oo lagu badbaadin nuqul ka mid ah fariimaha aad ka dib on loo gudbin karaa si aad u Samsung telefoonka ama qalab cusub.
> Resource > Android > Sidee si ay u gudbiyaan Messages ka Samsung in Samsung